QIIMAYN: Xiddigaha Khadka Dhexe Ah Ee Abid Ugu Fiican Kubadda Cagta Oo La Qiimeeyay - Miyay Kooxdaadu Wax Ciyaartoy Ah Ku Yeelatay? - Gool24.Net
QIIMAYN: Xiddigaha Khadka Dhexe Ah Ee Abid Ugu Fiican Kubadda Cagta Oo La Qiimeeyay – Miyay Kooxdaadu Wax Ciyaartoy Ah Ku Yeelatay?
Xiddigaha khadka dhexe ka dheela ee kubadda cagta ayaa dabcan ah kuwo markasta booskaas uu cadaadis ku saaran yahay maadaama oo ay yihiin mishiinka fursad abuurista iyo sidoo kale kubad dilista ee kooxda.
Dabcan dunida kubadda cagta ayay soo mareen xiddigo badan oo khad dhexe ah oo kasoo ciyaaray heerka ugu sarreeya isla markaana soo xakameeyay kulamo badan oo muhiimadooda leh.
Anagoo dhawaan idinla soo wadaagnay qiimayn dhinaca weeraryahanada ah oo laga sameeyay barta Twitter-ka ee ShotOnGoal Transfers ayaanu haatana idiin muujin doonaa qiimayn isla ishaas ka timid oo khadadka dhexe ah.
Qiimayntan oo ah mid ka kooban shan dabaqadood oo kala sarreeya ayay figta ugu sarreysa ku midaysan yihiin Xavi Hernandez iyo Andries Iniesta kuwaas oo ah laba xiddig oo heer kasta oo kubadda cagta ah isku soo muujiyay koob kastana ku guuleystay.
Khaanada labaad ayuu kasoo muuqday Zinadine Zidane walow uu saddex Ballon d’Or soo hantay isla markaana sidoo kale lagu sifeeyo mucjisada nus-qarnigii ugu dambeeyay ee kubadda cagta hadana waxa uu qiimayntan kaga hoos maray Xavi iyo Iniesta.
Sidoo kale booska khaanada labaad ayay Zizou kula midaysan yihiin halyeey Andrea Pirlo iyo kabtankii khadka dhexe ee Man United lama taabtaanka ka ahaa ee Roy Keane.
Waxyaabaha ugu layaabka badan ee xogtan ayay kamid tahay in Steven Gerrard uu khaanada u dambaysa ee shanaad ku qiimaysan yahay.
Halkan Hoose Kaga Boggo Qiimayntan
Si kastaba, Adigu akhriste miyaad qiimayntan si buuxda u taageersan tahay? Haddiiba ay jawaabtaadu tahay maya yaa boos uusan u qalmin oo uu ka qiimo sarreeyo ama ka qiimo hooseeyo la galiyay?